आईपीएलका बाँकी सबै खेल मुम्बईमा ! | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
आईपीएलका बाँकी सबै खेल मुम्बईमा !
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) का बाँकी सबै प्रतिस्पर्धाहरू मुम्बईमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ । भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) नजिकको स्रोतका अनुसार अहिले यसका लागि आवश्यक तयारी हुँदैछ । सोमबार कोलकाता नाइट राईडर्सका दुई खेलाडी वरुण चक्रवर्ती र सन्दीप वारियरलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि आईपिएलमा हंगामा मच्चिएको थियो । त्यसयता, कोलकाता र रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरबीचको म्याच स्थगित भएको थियो ।
बीसीसीआईका अधिकारीहरुका अनुसार यसै साताको अन्त्यदेखि नै आईपिएलका खेल मुम्बईमा सुरु हुनसक्छन् । अर्थात्, कोलकाता र बैंगलोरमा खेल हुनेछैन । त्यस्तै प्लेअफसहित फाइनल प्रतिस्पर्धा यसअघि तय भएको स्थल अहमदावादमा हुनेछैन । यी सबै खेल मुम्बईमै हुनेछन् । यद्यपी, यसबारे अन्तिम फैसला आउनै बाँकी छ ।
बीसीसीआईको यस योजनाअन्तर्गत ८ या ९ मेईदेखि आईपिएलका सबै प्रतिस्पर्धा मुम्बईका तीन रंगशालामा आयोजना हुनसक्छन् । वानखेडे, ब्रेबन र डिवाई पटिल रंगशालमा खेल हुनेछन् । वानखेडेमा यसअघि नै सिजनमा १० वटा म्याच आयोजना भइसकेका छन् ।